Laacib ay Zlatan soo wada ciyaareen oo malaha xaqiijiyey in uu ku biiray Manchester United – Gool FM
Laacib ay Zlatan soo wada ciyaareen oo malaha xaqiijiyey in uu ku biiray Manchester United
Kaafi June 9, 2016
(Manchester) 09 Juunyo 2016. Laacibkii hore ee Manchester City John Guidetti ayaa qishay in Zlatan Ibrahimovic uu guul ku gaari doono Manchester United iyada oo la hadal hayo in Swedish-ka uu ku biiri doono dhinaca Old Trafford.
34 jirka ayaa la filayaa in uu toddobaadkan xaqiijiyo in uu qandaraas sanad ah u saxiixay Red Devils.
Weeraryahankii hore ee Paris Saint – Germain waxaa lagu heli karaa bilaash, Jose Mourinho waxa uu isha ku hayaa in uu dib ula midoobo.
Guidetti, oo toddobo sano ku soo qaatay Manchester City ayaa qaba in dhibaato uusan la kulmi doonin Zlatan saameyna ku yeelan doono da’yarta.
‘Waxaan qabaa in uu sideyda oo kale u garanayo cimilada Manchester,’ ayuu yiri Guidetti.
‘Wuu saldhigan doonaa. Meel walba ee uu aaday bandhigyo ayuu ka sameeyey. Waa ciyaaryahan heer sare , waa shaqsi heer sare ah. Koox kasta ee uu ka mid noqdo waa in ay ka mahad naqaan.
‘Waa cajiib, waa mid wanaagsan. Sida uu ula hadlyo da’yarta, sida uu tayada u dalbado, waa sharaf dhab ah in aan ka soo garan dheelay.
‘Ma jiri doono Zlatan kale; waa midkaa qura. Sida uu u hadli jiray oo uu u dhaqmi jiray ayaa I dhiiri galisay. Waxaa uu dhihi jiray, “Waxaan noqonayaa kan ugu wanaagsan” , taasna waa wax Swedish-ka aysan cadiyan oran.”
SAWIRRO: Jermain Defoe oo heshiis cusub lagu abaal mariyay
Mourinho: Aqoonta dheer ee uu Manchester United u leeyahay Carrick waa mid qiima ii leh